Turjum mareegta WordPress | Gtbabel
Turjumaada la WordPress
Habka ugu fiican ee boggaga WordPress looga dhigi karo mid luuqado badan leh: oo ku habboon mareegaha fudud iyo kuwa adag labadaba. Iyada oo la kaashanayo turjumaadaha tooska ah oo aad dib u eegi karto sidaad rabto.
Turjun mareegtaada hadda
Furaha turjumaada ee qof walba
Iyada oo la kaashanayo xallintayada, waxaad u turjumi kartaa degelkaaga WordPress lambar kasta oo luqado ah waqti yar gudahood. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad kordhiso taraafikada xogta caalamiga ah, gaarto dhagaystayaasha caalamiga ah oo aad furto suuqyo cusub: Adigoon gelin kharashyo horumarineed oo sarreeya ama dadaallada dayactirka. Xalkayagu wuxuu bixiyaa hawlo soo jiidasho leh oo loogu talagalay bilawga iyo khabiirada labadaba kuwaas oo ah kuwa labaad ee aan midna ahayn.
Saaxirkeena habaynta ayaa ku geyn doona mareegaha luqadaha badan 5 daqiiqo gudahood. Adigoon aqoonta barnaamijka lahayn ama wax ka beddelka mawduucaaga. Marka la dejiyo, nuxurka cusub si toos ah ayaa loo tarjumi karaa haddii la rabo: Oo waxaad xoogga saari kartaa horumarinta wax cusub.
SEO/waxqabadka la hagaajiyay
Waxay ku xisaabtantaa wax kasta oo lagama maarmaan u ah wanagsan, SEO-optimized website-ka luqado badan: Haddi ay tahay tarjumaadda cinwaanka, sharaxaad meta, slugs, hreflang tags, HTML sifooyinka dhaadheer: Google ku farxi doonaa. Waxaan sidoo kale la soconnaa plugins-yada waaweyn ee SEO.
Aad loo habeyn karo
Dhammaan khubarada, waxaanu bixinaa hawlo ay ka mid yihiin tarjumaada XML/JSON, ogeysiisyada iimaylka, iimaylka/turjumaada PDF, dhoofinta/soo dejinta qaabab badan oo faylal ah, laqabsiga adeegyada kala duwan ee tarjumaada iyo wax ka badan oo aan lahayn plugin kale oo suuqa ku jira. .
Astaamaha kugu dhiirigelin doona
Waxaan nahay xalka kaliya ee plugin bixiya turjumaadda tooska ah ee macluumaadkaaga jira – marka la riixo badhanka. Wax kasta oo isbeddel ah, adeegga ogaysiinta iimaylka ee tooska ah ayaa ku wargelin doona dhammaan isbeddellada lagu sameeyay afka hooyo. Oo haddii aad rabto in turjumaadaha ay dib u eegis ku sameeyaan hay'ad tarjumaad xirfad leh, waxaad dhoofin kartaa dhammaan turjumaadaha tooska ah oo qaabab kala duwan ah oo haddana soo dejin kartaa mar kale markaad taabato badhanka.
Isbarbardhigga pluginnada kale ee luqadaha badan ku hadla
Doorashada tignoolajiyada saxda ah ayaa muhiim u ah kharashka horumarinta ee socda iyo guusha mashruuca, gaar ahaan mashaariicda waaweyn ee shabakada. Xalalka plug-in ee la aasaasay ee suuqa waxay leeyihiin habab farsamo oo kala duwan waxayna si dabiici ah u leeyihiin faa'iidooyin iyo faa'iido darrooyin. Xalkayagu wuxuu ku qanciyaa astaamo badan oo kala duwan wuxuuna isku daraa faa'iidooyinka xalalka plugin ee jira suuqa WordPress.
Gtbabel WPML Badan TranslatePress Dawacadaha Luuqadaha Badan GTranslate
Turjumaada tooska ah
Turjun bogga oo dhan
Shakhsi ahaan waa la ballaarin karaa
Luuqado badan oo asal ah
Tifaftiraha dhabarka dambe
Adeegga turjumaada shaqsiga ah
Qaybaha gaarka ah
Martigelinta maxalliga ah
LP-yada gaarka ah ee dalka
Qiimaha sanadlaha tusaale ahaan (qiyaastii) 149 € 49 € 99 € 139 € 99 € 335 €
La jaanqaadi kara fiilooyinkaaga, mawduucyada iyo maktabadaha
Bilow tarjumaada degelkaaga maanta
Haddi ay noqoto wakaalada webka, shirkada xayaysiisyada, wakaalada turjumaada ama macmiilka dhamaadka: Waxaanu haynaa xidhmada saxda ah ee dhamaan xaaladaha ku jira faylalkayaga: Iyada oo nooca bilaashka ah ilaa shatiga ganacsiga gaarka ah, dhammaan xulashooyinka ayaa kuu furan - oo qiimo aad u soo jiidasho leh. Dooro xirmo kugu habboon oo ku dhaqan mareegahaaga maanta luqado badan oo dhammaystiran.
Soo deji hadda
Loogu talagalay 1 degel
1 sano oo cusbooneysiin ah
Dhammaan faa'iidooyinka PRO
Cusbooneysiin aan xadidneyn
Tilmaamaha shakhsi ahaaneed
Tiro kasta oo shabakado ah